Best Destinations In Europe To Travel Munguva A Weekend | Save A Train
musha > Travel Europe > Best Destinations In Europe To Travel Munguva A Weekend
Mugomba ndege kuti chitima uye kufamba Europe kuti Weekend Wonder. Save A Train zvinoita nyore kuti bhuku mukati maminitsi pasina vakawedzera mari, saka unogona kunakirwa yako mari iri kubhangi mabasa! Heano sarudzo yedu Best Destinations mu Europe kufamba munguva pakupera kwevhiki nechitima.
Best suo Destinations mu Europe kufamba munguva vhiki: Barcelona
Takaona chatted pamusoro Spain kakati. Unogona kuongorora dzimwe nyaya yedu pano. nhasi, Mazano dzedu Best Destinations mu Europe kufamba munguva pakupera kwevhiki nechitima ari kutaura chete Barcelona.
Barcelona rakanyatsojeka nyore kuwana kubva kumativi dzakawanda Europe, asi nokuda nyore kuzviwana, tinenge kusiya kubva London nokuti rwendo urwu. Siyai basa pa 2 pm musi weChishanu, nenguva kuti abate 3 pm Eurostar kuna Paris. Pane chete nguva kuti Vin Rouge ari Parisian Datenroku asati achikwira "chitima hotera" kuna Barcelona.
Zvino kuti uri ikoko, zvokuita:
Zvichida anozivikanwa zvikuru mamiriro muBarcelona, ari Sagrada mhuri. Chechi yakanga yakagadzirwa ne mapurani Gaudi uye vave kuvaka chivako ichi kubvira 1882. Zvakaoma kuwana mufananidzo pasina Cranes, asi zviri zvachose inokosha kushanya.
Secret Barcelona muromo: Nekunze kwaro echivako chechechi panova dziva kubva apo unogona kutora zvinoshamisa mifananidzo. Usazviomesera Instagram mutambo simba, uye kubhadhara nzvimbo ino kushanyirwa.
Another wakakurumbira Chimiro kubudikidza Gaudi ndiye Casa batllo. Zvayaiva pedyo Las Ramblas, uchawana chivakwa chinokosha ichi panguva Passeig of Gracia. It yakavakwa 1877. iwe Fancy kana kushanyira chivakwa ichi uye achida kuona mukati zvakare, nechokwadi iwe pakutenga matikiti pachine, chiri mukurumbira mushanyi kukwezvwa muBarcelona uye anogona kuwana zvikuru vakabatikana, kunyanya pamatunhu mwaka.
Fun Fact: kuitika muridzi Casa batllo ndiyo mhuri Bernat, known for being the owners of Chupa Chups lollipops.
Nguva kudzokera kumba.
The 9 pm chitima hotera neSvondo manheru ichakudzosera pakati peLondon ku 11:55 ndiri neMuvhuro.
Best suo Destinations mu Europe kufamba munguva vhiki: Rome
The Eternal City kwakafanana huchikwezva sezvo nokusingaperi uye hatina kukwanisa kutaura nezvenyaya Weekend uchapukunyuka pasina izvozvo! Tora zvemasikati Eurostar uye kuchinja Paris nokuda Rome. Kuramba pamusoro chisvusvuro ari resitorendi motokari, regera yenyu akarara kana couchette usiku, uye Wake kuti chaiwo Italian nzvimbo.
Roma ndiyo nyore mumwe wedu chandinodisisa maguta mu Europe. Kunyanya kana uri hanimunu. Unogona kuverenga nezvazvo pano. Pane chinhu munhu wose kunyange. Nzvimbo izere kusvikira pamuromo pamwe nokuona uye ane zviuru zvemakore zvenhoroondo layered pamusoro roga - uchawana zvose pano kubva matongo weRoma Renaissance unyanzvi. Zvinonyaradzawo kumusha naka chikafu! zvechokwadi 3 Mazuva muRoma hakuna kukwana kuona zvachose zvose kuti guta rine kupa, asi zviri zvechokwadi zvokuti kuona zvose huru kana iwe kushandisa nguva yako zvinobudirira.
Vatican City ndicho chinhu chekutanga pane yedu runyorwa rwekushanya kwako kuRome. Chinhu nyika wayo, mukati Rome, uye musha nyika yakakurumbira nzvimbo kusanganisira Vatican Museum, ari Sistine Chapel, uye St. Petro Basilica.
Tinoratidza Mauya pano mangwanani uye musoro ngaatarire nokuda Vatican Museum yenyu ruka mutsara tikiti. We kufukidza nzira tisangosiya mitsetse muRoma zvakare mberi this post, asi kana imi kutenga ane mashoko Roma uye Vatican zvichipfuura, uchava kusarudza kwerubwinyo rwakagara rwuripo-bhuku timeslot wenyu tisangosiya mutsetse hwokupinda.
Best Gateway Destinations mu Europe kufamba munguva vhiki: KweBrussels uye Amsterdam
With itsva-ish mukuru-nokukurumidza Eurostar Dzidzisa London kuna Amsterdam. Panzendo pakati London uye kweBrussels waisitora 5 maawa uye zvaisanganisira kuchinja nezvitima muna kweBrussels. The itsva chitima kuda senga 900 vakatakurwa rimwe zuva uye achatora chete 4 maawa. Perfect rwendo kuenda kweBrussels kana Amsterdam nokuda Weekend!
Zvokuita kweBrussels munguva vhiki Gateway:
Kune zvinhu zvakawanda kudaro kuitei kweBrussels, kunyanya pamusoro mapfupi vhiki rwendo. Zviri rimwe ramaguta iwayo izvo wakakwana pakupera kwevhiki refu, kuongorora zvose nenhoroondo nzvimbo vakadadira ose waffles unokwanisa kuwana maoko enyu pamusoro.
Hazvina basa kuti nguva zhinji iwe kushanyira Grand Place, ndiyo imwe nzvimbo kuti nguva dzose saka yakanaka kushanyira. Kufambidzana shure anenge 300 makore, Grand Place anyanya naka kupotsa.
Pane dzimwe nguva gore, uchawana mashomanana siyana zviitiko, misika, uye unyanzvi zvivako. Musakanganwa kushanyira kweBrussels City Museum uye Town Hall kuti vari vaviri vakahwanda pamusoro pachivara.
KuCologne kweBrussels Zvitima
Paris kuti Liege Zvitima
KweBrussels kuti Liege Zvitima
KweBrussels ane guru (uye zvimwe, zvikuru) imba yedare yose Europe. ikozvino, pane pari vamwe restorations kushanda mberi asi kuti haafaniri kurega kushanya kwenyu - chaizvoizvo ndiwo Vakamupfekedza chivakwa.
Unofungei mazano edu? Taitofanira vanoda kuziva! yeuka, Save A Train zviri nakisa nyore kushandisa uye haana anovanza mari! Book Weekend yako kure nechitima nesu, nhasi!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-travel-during-weekend%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / kuti ru to / ja kana / TR uye mimwe mitauro.
#casabatllo #palaisdejustice #sagradafamilia #vhiki Barcelona eurostar zororo travelamsterdam travelrome Guta Vhatikeni